AA အား ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးပှဲ စားပှဲဝိုငျးသို့ ဖိတျချေါသငျ့ကွောငျး ၂၀၁၆-ခုနှဈက ဦးဝစေိနျအောငျ၏ အမြိုးသားလှတျတျော အဆို – Kyaw Zaw Oo's Blog
May 4, 2016 March 9, 2019 kyaw zaw oo
AA အား ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးပှဲ စားပှဲဝိုငျးသို့ ဖိတျချေါသငျ့ကွောငျး ၂၀၁၆-ခုနှဈက ဦးဝစေိနျအောငျ၏ အမြိုးသားလှတျတျော အဆို
(၂၀၁၆-ခုနှစ်၊ မေလ ၃ ရက်)
ဦးဝေစိန်အောင်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ၏ “မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (ရက္ခိုင့်တပ်မတော်) တို့အကြား ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ယခုတလော တစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲများကို ချက်ချင်းရပ်စဲပြီး AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (ရက္ခိုင့်တပ်မတော်) ကို နိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးပွဲသို့ ဖိတ်ခေါ်သင့်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း အရေးကြီးအဆို”
“အဓိကအချက်ကတော့ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကို နယ်ချဲ့တို့ထံမှ တိုင်းရင်းသားတွေ စုပေါင်းတိုက်ခိုက်ယူလာခဲ့တုန်းက ပေးခဲ့တဲ့ကတိက၀တ်များကို အုပ်ချုပ်သူအစိုးရ အဆက်ဆက်က အကောင်အထည်မဖော်ခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကတိက၀တ်တွေကတော့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာ နိုင်ငံကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရာမှာချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ကတိက၀တ်များကို အကောင်အထည်မဖော်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ မဖော်သေးလို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစာချုပ်များပါ ကတိက၀တ်တွေကို တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေကို မရလို့ဖြစ်ပါတယ်။”
“လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲချင်း ချေမှုန်းနိုင်ရုံနဲ့ ဒီပဋိပက္ခဟာ ထာဝစဉ်ရပ်စဲသွားမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မြန်မာ့သမိုင်းက သက်သေပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုးတိုင်း လူမျိုးတိုင်းမှာ မျိုးဆက်ဆိုတာရှိပါတယ်။ မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာလည်း ရှိတာပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပကတိ တရားတွေကြောင့် AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(ရက္ခိုင့်တပ်မတော်)ကို နိုင်ငံရေးအရ စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးဆွေးနွေးပွဲသို့ ဖိတ်ခေါ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။”
(စတင်ချိန် – ၁၀း၃၂)
လေးစားအပ်ပါတဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား . . . ။ ကျွန်တော်ကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)မှ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝေစိန်အောင် ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်အရေးကြီးအဆိုတစ်ရပ်ကို တင်သွင်းသွားဖို့ဖြစ်ပါ တယ်။
ကျွန်တော် တင်သွင်းမယ့် အရေးကြီးအဆိုကတော့ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(ရက္ခိုင့်တပ်မတော်) တို့အကြား ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အခုတလော တစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲများကိုချက်ချင်းရပ်စဲပြီး AA လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ကို နိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးပွဲသို့ဖိတ်ခေါ်သင့်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း အရေးကြီးအဆို ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား . . . ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့ကစလို့ တစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(ရက္ခိုင့်တပ်မတော်)တို့အကြား တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်တွေနဲ့ ကျေးရွာအချို့မှ ရွာသူရွားသားအချို့ Porter ဆွဲခံရ၊ တချို့သေဆုံးရ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ကလေးသူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများအပါအ၀င် ရာထောင်ချီသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ စစ်ပြေးရှောင်ဒုက္ခသည်များအဖြစ် တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးနေကြရတာ ကြားသိတွေ့မြင်နေရပါတယ်။
မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ယာယီတပ်ရင်းမှူးတစ်ဦးအပါအ၀င် အရာရှိစစ်သည်များ တိုက်ပွဲအတွင်း အသက်ဆုံးရှုံးရကြောင်းလည်း အစိုးရထုတ်သတင်းစာများထဲတွင် ဖော်ပြပါရှိ၍ သိရှိရပါတယ်။ တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုရင် နှစ်ဖက်စလုံးဆုံးရှုံးရသည်သာမက ပြည်သူများမှာလည်း မြေစာပင်ဘ၀ရောက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ တိုက်ပွဲများသည် ယနေ့အထိ ဖြစ်ပွားနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ပွဲဒေသများအတွင်း အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ နေအိမ်များကို စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးခဲ့ရ၊ လယ်ယာမြေများကိုစွန့်ပစ်ထွက်ပြေးခဲ့ရ၊ စားရမဲ့သောက်ရမဲ့ဘ၀ဖြင့် လူသားများခံနိုင်ရည်မစွမ်း နိုင်သော ဧပြီလ မေလ တို့ရဲ့ ထူးကဲလွန်အပူ နေပူကျဲကျဲအောက်တွင် ဒုက္ခသည်စခန်းများရှိရာသို့ ထွက်ပြေးလာရသည်မှာ မဖြစ်သင့် မဖြစ်ထိုက်သော လူသားအခြေအနေများဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခြေအနေများကို ကုသဖို့ ချက်ချင်းဆို ချက်ချင်း တိုက်ပွဲများရပ်စဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
လေးစားအပ်ပါသော အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား . . . ။ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူ ပေါက်ပွားလာသော ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် နှစ်ပေါင်း (၇၀)နီးပါး မြန်မာပြည်တစ်ဝန်း၊ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ စစ်ဘေး ဒုက္ခပင်လယ်ဝေခဲ့ရပါတယ်။ ဖဆပလခေတ်၊ တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ်၊ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်၊ န၀တ၊ နအဖခေတ်အဆက်ဆက်မှာလည်း ဒီပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေးအတွက် အစိုးရက ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကို ဖြေရှင်းမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်များ တစ်ခေတ်ပြီး တစ်ခေတ်တိုးပွားလာတာကိုသာ တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ အဓိကအချက်ကတော့ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကို နယ်ချဲ့တို့ထံမှ တိုင်းရင်းသားတွေ စုပေါင်းတိုက်ခိုက်ယူလာခဲ့တုန်းက ပေးခဲ့တဲ့ကတိက၀တ်များကို အုပ်ချုပ်သူအစိုးရ အဆက်ဆက်က အကောင်အထည်မဖော်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကတိက၀တ်တွေကတော့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာ နိုင်ငံကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရာမှာချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ကတိက၀တ်များကို အကောင်အထည်မဖော်လို့ဖြစ်ပါ တယ်။ မဖော်သေးလို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစာချုပ်များပါ ကတိက၀တ်တွေကို တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေကို မရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(ရက္ခိုင့်တပ်မတော်)ကလည်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ တန်းတူရေး၊ ရခိုင်တို့ကံကြမ္မာကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းရေးဆိုတဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေကို တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေ တယ်လို့ ကြေညာထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲဟာ နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးရရှိရေးတိုက်ပွဲလို့ မြင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးမှုရှိမှသာ ပြေလည်နိုင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဖြေရှင်းမှ ထာဝစဉ် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မျှော်လင့်ချက်ပေါ်လာမည်လို့ မြင်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲချင်း ချေမှုန်းနိုင်ရုံနဲ့ ဒီပဋိပက္ခဟာ ထာဝစဉ်ရပ်စဲသွားမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မြန်မာ့သမိုင်းက သက်သေပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
လူမျိုးတိုင်း လူမျိုးတိုင်းမှာ မျိုးဆက်ဆိုတာရှိပါတယ်။ မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာလည်း ရှိတာပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပကတိ တရားတွေကြောင့် AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(ရက္ခိုင့်တပ်မတော်)ကို နိုင်ငံရေးအရ စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးဆွေးနွေးပွဲသို့ဖိတ်ခေါ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံတွင် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးဖြေရှင်းနိုင်အောင်အထိ AA လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့(ရက္ခိုင့်တပ်မတော်)ကို ခေါ်ယူဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါမှ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ရေရှည်ငြိမ်းချမ်း ရေး၊ ထာဝစဉ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလည်းရရှိလာမည် ဖြစ်ပါတယ်။
လေးစားအပ်ပါသော ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။ ဒါကြောင့် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(ရက္ခိုင့်တပ်မတော်)တို့ ယခုတလော တစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲများကို ချက်ချင်းဆို ချက်ချင်းရပ်စဲပြီး AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(ရက္ခိုင့်တပ်မတော်)ကို နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးပွဲသို့ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးရန်လိုအပ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း အရေးကြီးအဆိုတစ်ရပ်ကို တင်သွင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (သြဘာသံများ)
ဦးဝေစိန်အောင်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်။
၂၀၁၆-ခုနှစ် မေလ ၃ ရက်နေ့
(ပြီးဆုံးချိန် – ၁၀း၄၀)
သတင်းကောက်နှုတ်ချက် [from RFA Burmese (2016-05-02)]
“အဲ့ဒီအဆိုမှာ AA တပ်မတော်လို့ သုံးနှုန်းထားတာကို တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် နှစ်ဦးက ကန့်ကွက်ရာ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးမန်းဝင်းခိုင်သန်းက AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့လို့သာ သုံးနှုန်းဖို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ဦးဝေစိန်အောင် တင်တဲ့ အရေးကြီးအဆိုကတော့ AA တပ်မတော်ကို နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ဖိတ်ခေါ်သင့်ကြောင်း အဆိုဖြစ်ပါတယ်၊ ခုနက တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်ပြောသလို AA တပ်မတော်ဆိုတာ မရှိဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ကျနော်နုတ်ပေးပါမယ်၊ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့လို့ ကျနော်သတ်မှတ်ပေးပါမယ်” –
RFA Burmese (2016-05-02)
(၂၀၁၆-ခုနှဈ၊ မလေ ၃ ရကျ)
ဦးဝစေိနျအောငျ၊ ရခိုငျပွညျနယျမဲဆန်ဒနယျအမှတျ (၁) ၏ “မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ AA လကျနကျကိုငျအဖှဲ့ (ရက်ခိုငျ့တပျမတျော) တို့အကွား ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး ယခုတလော တဈကြော့ပွနျဖွဈပှားနတေဲ့ တိုကျပှဲမြားကို ခကျြခငျြးရပျစဲပွီး AA လကျနကျကိုငျအဖှဲ့ (ရက်ခိုငျ့တပျမတျော) ကို နိုငျငံရေးအရဆှေးနှေးပှဲသို့ ဖိတျချေါသငျ့ကွောငျး ပွညျထောငျစုအစိုးရအား တိုကျတှနျးကွောငျး အရေးကွီးအဆို”
“အဓိကအခကျြကတော့ မွနျမာ့လှတျလပျရေးကို နယျခြဲ့တို့ထံမှ တိုငျးရငျးသားတှေ စုပေါငျးတိုကျခိုကျယူလာခဲ့တုနျးက ပေးခဲ့တဲ့ကတိကဝတျမြားကို အုပျခြုပျသူအစိုးရ အဆကျဆကျက အကောငျအထညျမဖျောခဲ့လို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီကတိကဝတျတှကေတော့ ပွညျထောငျစုမွနျမာ နိုငျငံကိုဖှဲ့စညျးတညျထောငျရာမှာခြုပျဆိုခဲ့တဲ့ ပငျလုံစာခြုပျကတိကဝတျမြားကို အကောငျအထညျမဖျောလို့ဖွဈပါတယျ။ မဖျောသေးလို့လညျး ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီစာခြုပျမြားပါ ကတိကဝတျတှကေို တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ ရပိုငျခှငျ့တှကေို မရလို့ဖွဈပါတယျ။”
“လကျနကျကိုငျတိုကျပှဲခငျြး ခမြှေုနျးနိုငျရုံနဲ့ ဒီပဋိပက်ခဟာ ထာဝစဉျရပျစဲသှားမှာ မဟုတျဘူးဆိုတာ မွနျမာ့သမိုငျးက သကျသပွေထားပွီးဖွဈပါတယျ။ လူမြိုးတိုငျး လူမြိုးတိုငျးမှာ မြိုးဆကျဆိုတာရှိပါတယျ။ မြိုးခဈြစိတျဆိုတာလညျး ရှိတာပါပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီပကတိ တရားတှကွေောငျ့ AA လကျနကျကိုငျအဖှဲ့(ရက်ခိုငျ့တပျမတျော)ကို နိုငျငံရေးအရ စာခြုပျလကျမှတျရေးထိုးဆှေးနှေးပှဲသို့ ဖိတျချေါဖို့ လိုအပျပါတယျ။”
(စတငျခြိနျ – ၁ဝး၃၂)
လေးစားအပျပါတဲ့ အမြိုးသားလှတျတျောဥက်ကဋ်ဌကွီးနှငျ့ အမြိုးသား လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားခငျဗြား . . . ။ ကြှနျတျောကတော့ ရခိုငျပွညျနယျမဲဆန်ဒနယျအမှတျ (၁)မှ အမြိုးသားလှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဦးဝစေိနျအောငျ ဖွဈပါတယျ။ အခု ကြှနျတျောအရေးကွီးအဆိုတဈရပျကို တငျသှငျးသှားဖို့ဖွဈပါ တယျ။
ကြှနျတျော တငျသှငျးမယျ့ အရေးကွီးအဆိုကတော့ မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ AA လကျနကျကိုငျအဖှဲ့(ရက်ခိုငျ့တပျမတျော) တို့အကွား ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး အခုတလော တဈကြော့ပွနျဖွဈပှားနတေဲ့ တိုကျပှဲမြားကိုခကျြခငျြးရပျစဲပွီး AA လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့ကို နိုငျငံရေးအရဆှေးနှေးပှဲသို့ဖိတျချေါသငျ့ကွောငျး ပွညျထောငျစုအစိုးရအား တိုကျတှနျးကွောငျး အရေးကွီးအဆို ဖွဈပါတယျ။
အမြိုးသားလှတျတျောဥက်ကဋ်ဌကွီးနှငျ့ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားခငျဗြား . . . ၊ ၂၀၁၆ ခုနှဈ၊ ဧပွီလ ၁၆ ရကျနကေ့စလို့ တဈကြော့ပွနျဖွဈပျေါလာတဲ့ မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ AA လကျနကျကိုငျအဖှဲ့(ရက်ခိုငျ့တပျမတျော)တို့အကွား တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး ရသတေ့ောငျမွို့နယျ၊ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ၊ ကြောကျတျောမွို့နယျ၊ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျတှနေဲ့ ကြေးရှာအခြို့မှ ရှာသူရှားသားအခြို့ Porter ဆှဲခံရ၊ တခြို့သဆေုံးရ၊ သကျကွီးရှယျအိုမြား၊ ကလေးသူငယျမြား၊ အမြိုးသမီးမြားအပါအဝငျ ရာထောငျခြီသော အပွဈမဲ့ပွညျသူမြား စဈပွေးရှောငျဒုက်ခသညျမြားအဖွဈ တိမျးရှောငျထှကျပွေးနကွေရတာ ကွားသိတှမွေ့ငျနရေပါတယျ။
မွနျမာ့တပျမတျောမှ ယာယီတပျရငျးမှူးတဈဦးအပါအဝငျ အရာရှိစဈသညျမြား တိုကျပှဲအတှငျး အသကျဆုံးရှုံးရကွောငျးလညျး အစိုးရထုတျသတငျးစာမြားထဲတှငျ ဖျောပွပါရှိ၍ သိရှိရပါတယျ။ တိုကျပှဲတဈခုဖွဈပှားတယျဆိုရငျ နှဈဖကျစလုံးဆုံးရှုံးရသညျသာမက ပွညျသူမြားမှာလညျး မွစောပငျဘဝရောကျခဲ့ကွရပါတယျ။ တိုကျပှဲမြားသညျ ယနအေ့ထိ ဖွဈပှားနဆေဲလညျးဖွဈပါတယျ။ စဈပှဲဒသေမြားအတှငျး အပွဈမဲ့ပွညျသူမြား နအေိမျမြားကို စှနျ့ခှာ ထှကျပွေးခဲ့ရ၊ လယျယာမွမြေားကိုစှနျ့ပဈထှကျပွေးခဲ့ရ၊ စားရမဲ့သောကျရမဲ့ဘဝဖွငျ့ လူသားမြားခံနိုငျရညျမစှမျး နိုငျသော ဧပွီလ မလေ တို့ရဲ့ ထူးကဲလှနျအပူ နပေူကြဲကြဲအောကျတှငျ ဒုက်ခသညျစခနျးမြားရှိရာသို့ ထှကျပွေးလာရသညျမှာ မဖွဈသငျ့ မဖွဈထိုကျသော လူသားအခွအေနမြေားဖွဈပါတယျ။ အဲဒီအခွအေနမြေားကို ကုသဖို့ ခကျြခငျြးဆို ခကျြခငျြး တိုကျပှဲမြားရပျစဲဖို့လိုအပျပါတယျ။
လေးစားအပျပါသော အမြိုးသားလှတျတျောဥက်ကဋ်ဌကွီးခငျဗြား . . . ။ မွနျမာပွညျ လှတျလပျရေးနဲ့အတူ ပေါကျပှားလာသော ပွညျတှငျးစဈကွောငျ့ နှဈပေါငျး (၇၀)နီးပါး မွနျမာပွညျတဈဝနျး၊ မွနျမာပွညျသူပွညျသားမြား စဈဘေး ဒုက်ခပငျလယျဝခေဲ့ရပါတယျ။ ဖဆပလခတျေ၊ တျောလှနျရေးကောငျစီခတျေ၊ မွနျမာ့ဆိုရှယျလဈလမျးစဉျပါတီခတျေ၊ နဝတ၊ နအဖခတျေအဆကျဆကျမှာလညျး ဒီပွညျတှငျးစဈရပျစဲရေးအတှကျ အစိုးရက ဆှေးနှေးပှဲတှလေုပျပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခတှကေို ဖွရှေငျးမပေးနိုငျခဲ့ပါဘူး။ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျတပျမြား တဈခတျေပွီး တဈခတျေတိုးပှားလာတာကိုသာ တှမွေ့ငျနရေပါတယျ။ အဓိကအခကျြကတော့ မွနျမာ့လှတျလပျရေးကို နယျခြဲ့တို့ထံမှ တိုငျးရငျးသားတှေ စုပေါငျးတိုကျခိုကျယူလာခဲ့တုနျးက ပေးခဲ့တဲ့ကတိကဝတျမြားကို အုပျခြုပျသူအစိုးရ အဆကျဆကျက အကောငျအထညျမဖျောခဲ့လို့ပဲဖွဈပါတယျ။ အဲဒီကတိကဝတျတှကေတော့ ပွညျထောငျစုမွနျမာ နိုငျငံကိုဖှဲ့စညျးတညျထောငျရာမှာခြုပျဆိုခဲ့တဲ့ ပငျလုံစာခြုပျကတိကဝတျမြားကို အကောငျအထညျမဖျောလို့ဖွဈပါ တယျ။ မဖျောသေးလို့လညျး ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီစာခြုပျမြားပါ ကတိကဝတျတှကေို တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ ရပိုငျခှငျ့တှကေို မရလို့ဖွဈပါတယျ။ AA လကျနကျကိုငျအဖှဲ့(ရက်ခိုငျ့တပျမတျော)ကလညျး တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား တနျးတူရေး၊ ရခိုငျတို့ကံကွမ်မာကို မိမိတို့ကိုယျတိုငျဖနျတီးရေး၊ ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးရေးဆိုတဲ့ လူမြိုးတဈမြိုးရဲ့ ရပိုငျခှငျ့တှကေို တောငျးဆိုတိုကျပှဲဝငျနေ တယျလို့ ကွညောထားတာတှရေ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အခုဖွဈပှားနတေဲ့တိုကျပှဲဟာ နိုငျငံရေး အခှငျ့အရေးရရှိရေးတိုကျပှဲလို့ မွငျပါတယျ။ နိုငျငံရေးအရ ဆှေးနှေးမှုရှိမှသာ ပွလေညျနိုငျမယျလို့မွငျပါတယျ။ နိုငျငံရေးဖွရှေငျးမှ ထာဝစဉျ ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ မြှျောလငျ့ခကျြပျေါလာမညျလို့ မွငျပါတယျ။ လကျနကျကိုငျတိုကျပှဲခငျြး ခမြှေုနျးနိုငျရုံနဲ့ ဒီပဋိပက်ခဟာ ထာဝစဉျရပျစဲသှားမှာ မဟုတျဘူးဆိုတာ မွနျမာ့သမိုငျးက သကျသပွေထားပွီးဖွဈပါတယျ။
လူမြိုးတိုငျး လူမြိုးတိုငျးမှာ မြိုးဆကျဆိုတာရှိပါတယျ။ မြိုးခဈြစိတျဆိုတာလညျး ရှိတာပါပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီပကတိ တရားတှကွေောငျ့ AA လကျနကျကိုငျအဖှဲ့(ရက်ခိုငျ့တပျမတျော)ကို နိုငျငံရေးအရ စာခြုပျလကျမှတျရေးထိုးဆှေးနှေးပှဲသို့ဖိတျချေါဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ၂၁ ရာစု ပငျလုံညီလာခံတှငျ တိုငျးရငျးသားအခှငျ့အရေးဖွရှေငျးနိုငျအောငျအထိ AA လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့(ရက်ခိုငျ့တပျမတျော)ကို ချေါယူဆှေးနှေးရမှာဖွဈပါတယျ။ အဲဒါမှ အမြိုးသားရငျကွားစရေ့ေးကို ဖွဈနိုငျမှာဖွဈပွီး ရရှေညျငွိမျးခမျြး ရေး၊ ထာဝစဉျငွိမျးခမျြးရေးကိုလညျးရရှိလာမညျ ဖွဈပါတယျ။
လေးစားအပျပါသော ဥက်ကဋ်ဌကွီးခငျဗြား။ ဒါကွောငျ့ မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ AA လကျနကျကိုငျအဖှဲ့(ရက်ခိုငျ့တပျမတျော)တို့ ယခုတလော တဈကြော့ပွနျဖွဈပှားနတေဲ့ တိုကျပှဲမြားကို ခကျြခငျြးဆို ခကျြခငျြးရပျစဲပွီး AA လကျနကျကိုငျအဖှဲ့(ရက်ခိုငျ့တပျမတျော)ကို နိုငျငံရေးအရ ဆှေးနှေးပှဲသို့ဖိတျချေါဆှေးနှေးရနျလိုအပျကွောငျး ပွညျထောငျစုအစိုးရအား တိုကျတှနျးကွောငျး အရေးကွီးအဆိုတဈရပျကို တငျသှငျးအပျပါတယျခငျဗြား။ အားလုံးကြေးဇူးတငျပါတယျ။ (သွဘာသံမြား)
ဦးဝစေိနျအောငျ၊ ရခိုငျပွညျနယျမဲဆန်ဒနယျအမှတျ (၁)၊ အမြိုးသားလှတျတျော။
၂၀၁၆-ခုနှဈ မလေ ၃ ရကျနေ့
(ပွီးဆုံးခြိနျ – ၁ဝး၄၀)
သတငျးကောကျနှုတျခကျြ [from RFA Burmese (2016-05-02)]
“အဲ့ဒီအဆိုမှာ AA တပျမတျောလို့ သုံးနှုနျးထားတာကို တပျမတျောသား ကိုယျစားလှယျ နှဈဦးက ကနျ့ကှကျရာ အမြိုးသားလှတျတျော ဥက်ကဌ ဦးမနျးဝငျးခိုငျသနျးက AA လကျနကျကိုငျအဖှဲ့လို့သာ သုံးနှုနျးဖို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
“ဦးဝစေိနျအောငျ တငျတဲ့ အရေးကွီးအဆိုကတော့ AA တပျမတျောကို နိုငျငံရေးအရ ဆှေးနှေးပှဲသို့ ဖိတျချေါသငျ့ကွောငျး အဆိုဖွဈပါတယျ၊ ခုနက တပျမတျောသား ကိုယျစားလှယျပွောသလို AA တပျမတျောဆိုတာ မရှိဘူးဆိုတဲ့အတှကျကွောငျ့မို့ ကနြျောနုတျပေးပါမယျ၊ AA လကျနကျကိုငျအဖှဲ့လို့ ကနြျောသတျမှတျပေးပါမယျ” –
AA အား ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးပှဲ စားပှဲဝိုငျးသို့ ဖိတျချေါသငျ့ကွောငျး ဦးဝစေိနျအောငျ၏ အမြိုးသားလှတျတျော အဆိုကို တငျသှငျးကွောငျး ရေးသားဖျောပွထားသညျ့ Global New Light of Myanmar သတငျးစာ pdf (၂၀၁၆ မလေ ၃ ရကျထုတျ) အား ဤလငျ့ကို နှိပျ၍ download ခပြါ
U Wai Sein Aung
Previous Myanmar Times | Arakan MP-Elect: ‘I Will Rejoin With Like-Minded People’
Next စဈဘေးရှောငျ ဒုက်ခသညျမြားအား မိုးမကမြီကပငျ အကူအညီပေးနိုငျရနျ ရခိုငျအစိုးရက အမွနျဆုံး အကူအညီပေးသငျ့ကွောငျး အရေးကွီးအဆိုအား ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျောတှငျ ဦးကြျောဇောဦး၏ ထောကျခံ/အကွံပွု ဆှေးနှေးခကျြ